July « 2020 « Online Tv Nepal
धेरै भन्दा धेरै धनसम्पति कमाउने चाहाना कसलाइ नहोला र ? जसको लागि मानिसहरू कडा मेहेनत गर्न पछि हट्दैनन । तर लाखैा कोशिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन । समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चीज यदि गोजीमा राख्नाले धन सम्पति टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चीजहरू गोजीमा राख्नाले
मोरङमा भेटियो अनौठो प्रजातिको माछा !
मोरङमा नयाँ प्रजातिको माछा फेला परेको स्थानीयले बताएका छन्। मोरङको बेलबारी ६ को सोमबारे र बनौलबीच नहरको पानीमा स्थानीयले पहिचान गर्न नसक्ने प्रजातिको माछा भेटिएको हो। सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजनाको उक्त नहरमा दुईवटा माछा फेला परेका हुन। अनौठो लाग्ने माछा भेटिएपछि स्थानीयले त्यसलाई सुरक्षित राखेका छन्। नयाँ प्रजातिको माछा भेटिएपछि
दुखद खबर: नेपाली सेनाका पूर्व रथी कुलबहादुर खड्काको नर्भिक अस्पतालमा निधन !
नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त रथी कुलबहादुर खड्काकाे निधन भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका खड्काकाे उपचारका क्रममा मंगलबार निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पहिलो सरकारद्वारा सेनापतिमा नियुक्त भएका थिए । लेफ्टिनेन्ट जनरल खड्काको प्यान्क्रियाज क्यान्सर डायग्नोसिस गरिएको
काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ३ सय ६ पुगेको छ। मंगलबार ५३ जना संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या ३ सय नाघेको हो। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा काठमाडौंका ४८, ललितपुरका ४ र भक्तपुरका एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। उपत्यकामा
कतिपय कुराहरु हामिले आफ्नो सोचेर अरुलाई आफ्नो कुराहरु खोल्छौ । धेरै जसो कुराहरु अरुलाई खोल्दा पनि त्यसले हानि गर्न सक्छ । त्यसैले हामीले जीवनमा सदैव गोप्य राख्नुपर्ने केही कुराहरु पनि हुन्छन् । हामीले जीवनमा सधै गोप्य राख्नुपर्ने ७ कुराहरु बारे चर्चा गर्छौ । जुन तपाईको लागी राम्रो पनि हुन्छ ।राख्न
नेपाली बजारमा तरकारीको मूल्य बढेको छ । लकडाउन खुलेलगत्तै अहिले बजारमा तरकारी, फलफुल लगायत केही सामानहरुको मूल्य बढेको हो । लकडाउनमा सस्तो भएको तरकारी अहिले झन बढेको छ । बजारमा तरकारीको मूल्य विगतभन्दा दोब्बरले बढेको छ । बजारमा धार्नीको १ सय देखी १ सय २० रुपैयासम्म तिरेका ग्राहकले अहिले एक
काठमाडौंको कपन, आकाशे धारामा सोमबार बेलुकी ६ बजे खेल्न गएका बच्चाहरुले बिस्कुटको कार्टुनमा राखेर फालेको अवस्थामा यि नानीलाई रोईरहेको अवस्थामा देखे । बच्चाहरुले खबर गरेपछि ‘केयर बाल गृह’की संचालिका पुष्पा अधिकारीले आफु त्यहाँ पुगेको बताईन् । नानीलाई भेटेपछि सँस्थामा ल्याएर पुष्पाले रेखदेख गरिरहेकी छिन् । नानीको बारेमा थाहा पाएपछि हामी
धारिलो हतियार खुकुरी प्रहार गर्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मेलम्ची नगरपालिका–४ बस्ने थानकुनेका सोमबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मेलम्चीका प्रहरी निरीक्षक फलबहादुर तामाङले जानकारी दिए । सोही ठाउँका साइला तामाङसँग सामान्य भनाभन हुँदा सोमबहादुरले खुकुरी प्रहार गरेका थिए । खुकुरी हानेको सूचना पाउनासाथ इलाका प्रहरी
पत्नी राधिकासँगै प्रधानमन्त्री ओली बामदेवको घरमा !
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली भैंसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको घरमा पुगेका छन्। पत्नी राधिका शाक्यको साथमा ओली गौतमको घरमा पुगेका हुन्। ‘पत्नीलाई सँगै लिएर उहाँ गौतमको घरमा जानुभएको हो’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ‘यो विल्कुलै पारिवारिक भेटघाट हो, राजनीतिक होइन।’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल पनि गौतमकै घरमा छन्। गौतम